Racc, Axa, Catalana Occidente uye Rastreator.com inotungamira dhijitari zano mune inishuwarenzi chikamu | ECommerce nhau
Eva maria Rodriguez | | Zvechokwadi uye nhau, Marketing, Kutengeswa kweIndaneti
Racc, Axa, Catalana Occidente uye Rastreator.com ndiwo ma digital inishuwarenzi nharaunda ine hukuru hukuru mukati metiweki uye iyo inogadzira kuvimbika kwakawanda, maererano neshumo rekutanga pane inishuwarenzi digitaalinen ecosystem yakagadzirwa naAcceso, inotungamira kambani muMedia uye Consumer Intelligence kuSpain neLatin America. Chidzidzo chinoongorora kukura kwezviri mukati zvine chekuita neinishuwarenzi mu social network, kumisikidzwa kwemhando dzakasiyana muchikamu uye makiyi ekuwana zano rakabudirira muchikamu chino.
Chidzidzo ichi chinodhirowa mepu yechikamu chiri kupfuura nepakadzika digital yhanduko uye uko makambani einishuwarenzi anotanga kutora chinetso chekubatana nevagari kuburikidza nemasevhisi evatengi uye kushambadzira zvemukati. Chidzidzo ichi chinoratidza zvakare kuti vatengesi vechivanhu nevamiririri vanodzikira huremu pamberi pevatambi vatsva vari kutsvaga kuzviisa panzvimbo, sevanoenzanisa, uye kuzvipira kumakambani uye masevhisi avo hazvitsamire pahukuru hwevateereri vavo: nharaunda diki dzinobuda ne Kubatana senge izvo zvakagadzirwa naSeguros Bilbao, Previsión Sanitaria kana Reale Seguros.
El inishuwarenzi chikamu Icho chimwe cheavo ari kusangana nenzira yakadzama shanduko yakananga kumusika mune nhaurirano yakanangana nemutengi yakakosha, kwete chete kuti vagone kubatana nechiratidzo, asiwo kuti vanzwisise zvakadzama zvavanoda uye vovaendesa chipo chavo. Muchikamu, izvi zvinokonzerwa nehuremu hwemutemo uye iyo trajectory yakasungirirwa mune yakajairika bhizinesi simba. Kunyangwe isiri imwe yemapazi ane huvepo hukuru mumasaiti, chiitiko cheinishuwarenzi chikamu munzvimbo ino chiri kukura zvisingaite
1 Dhijitari ecosystem yeinishuwarenzi chikamu
2 Ziva mushandisi
Dhijitari ecosystem yeinishuwarenzi chikamu
Maererano ne kudzidza Kuwana, iyo ecosystem yekutaurirana muSpain nezve inishuwarenzi chikamu yakaoma. Vatengi neruzhinji rwevanhu vanogara pakati nepakati uye, zvakabatana navo, kune netiweki mavanotsvaga nzvimbo yavo kuburikidza nechizvarwa chemukati nemakambani, nheyo, vatengesi, vanachipangamazano, vafananisi nevatsigiri.
In the makambani, iwo chaiwo makwara e service customer Ivo vari kuwedzera kutamba chinzvimbo chinotungamira mukufambisa ramangwana kupa uye kudiwa kwemasevhisi. Uye zvakare, ivo vanomiririra mukana wekugadzirisa zviitiko uye chakakosha chishandiso chekuwana ruzivo nezve vatengi. Izvo, zvakare, zvinonyanya kubatsira mukuderedza kukanganisa kweanogona kuita mukurumbira dambudziko. Mhando bheji zano rezvinoenderana se axis yekugadzira kukosha uye kugadzira yakasimba, nharaunda dzakagadzikana dzine musiyano wakakura wekukosha.
Kana ari vafananisi, kusarudzika kwekupa kwacho kunotungamira vangangove vatengi kuti vape chinzvimbo chakakosha kune iyo vafananisi veinishuwarenzi, kunyanya kana vachipa ruzivo rwakadzama, rwakakwana uye rwakazvimirira. Kune rimwe divi, vafananisi vari kutora basa rekuyananisa pakati pekambani nevatengi, vachiita sereferenzi.
Nezve vatengesi nevamiririri, sevamiririri, vanorasikirwa nemukurumbira mukutarisana neruzivo rutsva uye nzira dzebhizinesi. Sponsors, social action entities uye nheyo zvinopa mamiriro eanokoshesa ehunhu nemisimboti kumakambani uye zvinopa kukosha kuzvirongwa zvavanoita.
ari media, vese generalists uye nyanzvi, vanoita basa rakakosha mukugadzirwa kwemukati uye chengetedza akasiyana maratidziro nevatengi vanogona mumatanho akasiyana ekutendeuka. Iwo maforamu anokanganisa chikamu chekupedzisira cheichi chiitiko chekubata masevhisi matsva, nekuda kwekusununguka uko mamwe emafungiro akataurwa anofungidzirwa.
Chidzidzo cheAcceso chinoratidza zvakare musiyano uripo pakati pe vateereri uye pfungwa yakafara ye kubatanidzwa, iyo inosanganisira, pakati pevamwe, mwero wekuzvipira, kuvimbika uye kukurudzira kwevashandisi kuenda kuchiratidzo. Nechikonzero ichi, zvakakosha kuti unzwisise kuti hurukuro yacho yakarongedzwa sei paInternet, uko nhanho dzakasiyana dzekufunga uye kushandurwa kwemutengi dzakagadzirwa uye ndeapi mafambiro epfungwa mune imwe neimwe nyaya. Kubudikidza nekuyera kwekudyidzana pakati pevanyori venharaunda, zvinokwanisika kuona kuvimba nekudyidzana kwavanochengetedza, hunhu hwakakosha hwekuwedzera pesvedzero pamusoro pavo nekugadzira kukosha kwechiratidzo.
Kubudirira kwe 2.0 web yakabvumira vagari kusangana mukati nharaunda dzemadhijitari nehukama kana zvakafanana zvido. Kukosha kwenzvimbo idzi kunowedzera nekukura panokura kukura kwenhengo dzadzo. Asi hukuru uhwu hahuyerwi nehukama hwepedyo, asi nekubatana kunoratidzwa nenhengo dzayo kuburikidza nezviito zvekongiri zvine chekuita nezviri mukati zvavanotaura, kugovana, kufunga kana kubvumidza. Kurarama Nharaunda ndiyo yekutanga chishandiso pamusika iyo inobvumidza kuyera uye kuyera kusangana uku, uchibvumira mabhenji ku:
Ziva maitiro ehurukuro pamusoro pechiratidzo kana chirevo chakarongeka, tsvaga vateereri vakasiyana uye mapatani avo echokwadi pesvedzero. Iyo inopa ratidziro uye yepasi rose chiono pasangano renharaunda yemagariro yakatenderedza chiratidzo, chikamu chayo uye yunivhesiti yayo yekufarira.
Tsanangura makiyi ekutaurirana uye kushambadzira zano rinoteedzerwa nevateereri vese, Kugadziridza iwo mameseji kuti aashandise iwo kunharaunda dzakasiyana dzekugara dzakatenderedza kambani. Inokutendera iwe kugadzira iyo levers yekuita kuti usimbise hurukuro inopfuura nhamba yevateveri.
Ziva chikuru inopisa yevateereri vakasiyana, kukura kwayo uye chiyero chemushonga uye kusimbisa hukama nevasiri-vakavimbika. Kurarama Nharaunda kunopa yakazara dhatabhesi yevanyori vanokwanisa, vakapatsanurwa nemabasa uye kukosheswa kuita masocial media Ads mishandirapamwe, kuita zviito zvekutaurirana, kukoka kuzviitiko, nezvimwewo, kuvaisa zvinoenderana nehunhu hwehukama (matauriro, batanidza nemamwe mabrand, kugona gadzira zvako zvemukati, degree rekubata, nezvimwewo).
Kurarama Nharaunda kunovimba nekwavo tekinoroji uye maitiro kuitira kuti mabrand anokwanisa kutora mukana wezvese zvavo chiteshi nenzira yekuvandudza inotarisana nekuziva maitiro, hukama uye maitiro evatengi. Iyo kambani inoshandisa algorithms e Network Sayenzi (kuranga kunoenderana nehukama hwehukama), kuti unzwisise kuti iyo vanobatana mabhureki uye nharaunda dzipi dzavanogadzira dzakatenderedza, pamwe nemaitiro ekuparadzirwa kweruzivo uye chinzvimbo uye kurudziro yenhengo yega yega yenharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Racc, Axa, Catalana Occidente uye Rastreator.com inotungamira dhijitari zano mune inishuwarenzi chikamu
Mmmelon anozvarwa, iyo Spanish yekutanga iyo inozochinja nzira yekubatana